प्रदेश ५- संक्रमित बढ्दै, परीक्षण घट्दै – Health Post Nepal
प्रदेश ५- संक्रमित बढ्दै, परीक्षण घट्दै
२०७७ वैशाख २४ गते १४:४५
प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षणको मात्रा भने घट्दो रुपमा छ । प्रयोगशालाको सामग्री, स्वाब संकलन सामग्री अभाव हुँदा र प्रयोगशालाको पिसिआर मेशिन बिग्रदा परीक्षणको दर घटेर गएको हो।
प्रदेश नं. ५ मा बैशाख १९ गते पहिलो पटक बाँके र रुपन्देहीमा १÷१ जना गरी २ जना कोरोना संक्रमितका बिरामी भेटिएका थिए । स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश नं. ५ को हप्तादिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो अबधिमा संक्रमित भेटिएसँगै परीक्षण दर बढाउनुपर्नेमा परीक्षण दर सुस्ताएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा बैशाख १७ गते २३५ जना र बैशाख १८ गते २२८ जनाको स्वाव संकलन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कोरोना संक्रमित भेटिने दिन ४९ जनाको स्वाब लिएको देखिन्छ । यो क्रम बैशाख २० गते केही बढेको देखिएपनि त्यसपछि भने स्वाब संकलन दर निकै कम छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार बैशाख २० मा १६१ जना, बैशाख २१ गते २१ जन, २२ गते ३१ जना र २३ गते ८३ जनाको स्बाव संकलन गरिएको छ । यसले कोरोना प्रयोगशालाको सामग्री अभाव र प्रयोगशालामा समस्या देखिएको पुष्टि गर्छ ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका तीन ठाउँ पिसिआर मेशिनबाट स्वाबको परीक्षण गरेको भनेपनि अहिलेपनि प्रदेश ५ बाट काठमाण्डौंको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब पठाउन रोकिएको छैन् । बैशाख २३ गतेको स्वास्थ्य कार्यालयको रिर्पोटमा राष्ट्यि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ६९ जनाको स्वाब परीक्षणको क्रममा रहेको देखिन्छ।
संक्रमितको उमेरगत तथ्याक हेर्दा प्रदेश ५मा ३० देखि ४४ बर्ष उमेरका बढी संक्रमित भएका छन् । यो उमेर समुहमा ११ जना संक्रमित भएका छन् भने दोस्रोमा ४५ देखि ६० उमेर समुहका छन् । यो संख्या ७ छ । त्यसैगरी १५ देखि २९ बर्ष उमेरका ४ जना र १५ बर्षभन्दा मुनिका २ जना संक्रमित छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कुल २४ जना संक्रमितमा १२ जना पुरुष छन् भने १२ जना महिला छन्।
कुन जिल्लामा कति स्वाबको नमूना
प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी १३६६ जनाको स्वाब लिइएको छ । स्वाबको नमूना संकलनको तथ्यांक हेर्दा तराइका जिल्लामा यसको मात्र बढी देखिन्छ भने एक पहाडी र एक हिमाली जिल्लामा भने अहिलेसम्म स्वाबको नमूना संकलन नै गरिएको छैन।
जिल्लागत रुपमा तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी बाँकेमा ३५८ जना, रुपन्देहीमा ३५२ जना, नवपरासीमा २०९ जना बर्दियामा १७० जना, दाङमा १३९ जना र कपिलवस्तुमा ८८ जना छन् । यी सबै तराई र भित्री मधेशका जिल्ला हुन् । पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुममा अहिलेसम्म स्वाबको नमूना लिइएको छैन् । त्यसैगरी कम स्वाब संकलन गरिएका जिल्लामा गुल्मीमा ६ जना, रोल्पामा १३ जना र पाल्पामा १४ जना रहेका छन्।
कुन जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा कति जना
प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा ५९७ वटा क्वारेन्टाइन छन्। ति क्वारेन्टाइनमा १४०६२ बेड क्षमता रहेकोमा ८१२७ जना बसिरहेका छन् । त्यसमध्ये ८७ जनाको स्वाब नमूना लिइएको छ भने आरडिटी लिनेको संख्या १३७ मात्र छ।
सबैभन्दा बढी रोल्पामा २९०२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यसपछि बर्दियामा २१६९ जना, प्यूठानमा ९९५ जना, पूर्वी रुकुममा ४४१ जना छन् । क्वारेन्टाइनमा कम हुने जिल्लाहरुमा दाङमा सबैभन्दा कम ९८ जना छन् । त्यसैगरी गुल्मीमा १०९ जना, पाल्पामा १३७ जना र अर्घाखाँचीमा १५९ जना छन्
पिसिआर किट छैन, आरडिटी पनि सीमित
प्रदेश ५ को जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब कलेक्सन किट सकिदा रुपन्देहीमा स्वाबको नमूना संकलन प्रभावित बनेको छ । त्यसैगरी भैरहवामा रहेको प्रयोगशालामा पिसिआर मेशिनका लागि प्रयोगशालामा चाहिने सामग्री समेत अभाव रहेको छ।
आरडिटि किट्स पनि सीमित संख्यामा भएपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र किट्न दिन थालिएको प्रयोगशालाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
हप्तादिनपछि बन्यो भैरहवाको पिसिआर मेसिन
प्रदेश ५ को भैरहवामा रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालको पिसिआर मेशिन हप्तादिनपछि मर्मत भएको छ । काठमाण्डौबाट आएको इन्जिनियरले उक्त मेसिन मर्मत गरेका हुन् ।
पुरानो मेसिन भएका कारण मेशिनबाट परीक्षण गर्न निकै गाहे भएको थियो । उक्त मेशिन काठमाण्डौको नार्कको प्रयोगशालाबाट ल्याइएको हो । नार्कमा उक्त मेशिन ४ बर्ष अघि ल्याइएको बताइन्छ ।
हप्तादिनदेखि निकै कठिनका साथ संचालनमा रहेको पिसिआर मेशिन तीन दिन चल्दै चलेन । तर स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने बाहिर प्रयोगशालाको सामग्री अभाव र किट सकिएको कारण परीक्षण नभएको भन्दै स्वाबको नमूना काठमाण्डौं पठाउँदै आएका थिए ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले काठमाण्डौंबाट आएका इन्जिनियरले मंगलबार साँझ मेशिनको मर्मत सकेको पुष्टि गरे ।
हामी नेपालगन्जमा केन्द्रित छौंः स्वास्थ्य निर्देशक
प्रदेश ५ का स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले अहिले आफुहरुको ध्यान नेपालगन्ज केन्द्रित भएको बताए ।
नेपालगन्जमा संक्रमितको संख्या धेरै भेटिएपछि त्यहाँतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । पहिलो संक्रमित भेटिएसँगै ९४ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट ९४ जनाको स्वाब नमूना लिदा २२ जना संक्रमित भेटिएकोमा अहिले फेरि ति व्यक्तिसँगको ३०० जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको निर्देशक गिरीले जानकारी दिए ।
मंगलबार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा असमझदारी देखिएपनि उक्त समुदायका अगुवाहरुको सहयोग लिइ काम भइरहेको उनको भनाई छ । नेपालगन्जको लागि प्रयोगशालाको सामग्री र स्वाब संकलनको सामग्रीको व्यवस्थापन भइसकेको निर्देशक गिरीले बताए ।
नेपालगन्जमा सतर्कता र परीक्षणमा ढिलाई गर्दा समस्या जटिल हुनसक्छ निर्देशक गिरीले भने, त्यसैले हाम्रो ध्यान कन्ट्याक्ट टे्सिङ र परीक्षणमा केन्द्रित छ ।
ल्याबसँग सम्बन्धित सामग्री आएपछि रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका केही ठाउँहरुमा परीक्षणलाई तीव्रता दिने उनले बताए । देशभर नै ति सामग्रीको अभाव हुदा प्रदेश ५ को नेपालगन्ज बाहेकका ठाउँमा परीक्षण कम हुन गएको उनको भनाई छ ।